Sheekh Mukhtaar Rooboow “Alshabaab waxaan ka baxay 5 sanno ka hor” - BBC News Somali
Image caption Sheekh Mukhtaar Rooboow oo saxaafadda kula hadlay Muqdisho
Sheekh Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur ayaa maanta warbaahinta kula hadlay hotel ku yaala magaalada Muqdisho, wuxuuna shaaciyey markii ugu horeysey fikirka uu ka aaminsanyahay Alshabaab.
Rooboow oo isu soo dhiibay dowladda federaalka ayaa saxaafadda u akhriyey war saxaafadeed qoraal ah oo sidoo kale la qeybiyey, oo ay ku qornaayeen afar qodob, waxaana ka mid ah
Dhanka kale Rooboow ayaa sheegey in ay wadahadalo u socdaan dowladda federaalka, uuna rajaynayo in ay wax wanaagsan kasoo baxaan.
Sida uu ku waramayo wariyaheena Muqdisho , in uu warbaahinta ka sheego fikirkiisa in uu Alshabaab ka baxay ayaa waxa ay shuruud u ahayd in heshiis kama dambeys ah lala saxiixdo Rooboow, shuruudaas oo uu horey u diidey Xassan Daahir Aweys oo wali dowladda u xiran.
Rooboow ayaa waxa uu sheegey in uu dhawr jeer lagu weeraray dhulkii miyiga ahaa ee uu ku dhuumanayay, uuna iska difaacay, isaga oo ugu dambaystiina u mahadceliyey dowladda Soomaaliya.
Miiskii uu shirka jaraa'id ku qabtay ayaa waxaa lagu gogley calanka Soomaaliya, taasi oo ka duwan ficiladii horey loogu bartay.
Inkasta oo dowladda horey cafis ugu fidisey hoggaanka iyo dagaalyahanada Alshabaab, haddane hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqaysa in ay baaritaan ku samayso Rooboow, caddaaladana horkeento.
"Sharciga caalamiga ah waxa uu mabnuucayaa in cafis la siiyo dadka mas'uulka ka ah gaboodfalada. Sheekh Mukhtaar Rooboow waxa uu xil hoggaan ka hayay Alshabaab, xiligiisana waxaan diiwaangalinay weeraro aanan loo aabo yeelin oo loo geystey shacabka, carruur la askareeyey iyo gaboodfalo kale oo loo geystey shacabkii ku hoosnoolaa. Dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa in ay baarto Rooboow kaalintii uu ku lahaa waxaas, islamarkaasina ay hubanti ka dhigto in dadkii mas'uulka ka ahaa falalkii foosha xumaa ee dhacay aysan ka fakanin ciqaab"
Image caption Saxaafadda Muqdisho